Dabo fanampiny - Filankevitry ny morontsiraka afovoany
Raha hitanao fa mitoka-monina tsy an-kijanona ny dabanao, dia azonao atao ny mahazo fanodinana fanampiny, zavamaniry an-jaridaina na dabam-pako ankapobeny amin'ny sara fanampiny fanampiny amin'ny vidin'ny filankevitry ny fanananao.
Misy ihany koa ny fanavaozana ny daba mena lehibe kokoa ho an'ny fako ankapobeny misy.
Ny tompon-trano ihany no afaka mangataka na manafoana daba fanampiny. Raha manofa ny trano ianao dia mila mifandray amin'ny mpitantana na ny tompony mba hiresaka momba ireo fanovana ireo.
Raha te hangataka tolotra fanampiny dia mila mameno ny Taratasy Fangatahana Serivisy Fako eto ambany ny tompony na ny tompon'andraikitra mpitantana ny trano.